HomeTORKIACentral Anatolia38 KayseriErciyes Weekend 53 90 mpitsidika avy amin'ny tanàna XNUMX no nampilamina
14 / 01 / 2020 38 Kayseri, Central Anatolia, ANKAPOBENY, TORKIA, TELPHER
erciyes dia nisy mpitsidika an'arivony maro avy tao an-tanàna tamin'ny faran'ny herinandro
Erciyes ririnina fizahan-tany ao Torkia flagship faran'ny herinandro ny 53 arivo mpitsidika avy amin'ny 90 faritany manodidina ny nampiantrano Torkia. Ny isany indrindra tamin'ny mpitsidika an'i Erciyes avy any ivelan'ny tanàna dia tonga tany Istanbul, Ankara, Antalya ary Adana.
Alpine tehezan-tendrombohitra eo amin'ny faneva, matanjaka foto-drafitrasa sy ny superstructure, milina toerana, ny teknolojia farany indrindra, sy ny fitaterana fotodrafitrasa ilaina dia mitombo isan-taona bebe kokoa liana amin'ny Tiorkia Erciyes no tena mandroso ny iray amin'ireo mpitarika Eoropa Ski Resorts.
Torkia indrindra fa manodidina Istanbul, Izmir toy ny iray amin'ny alalan'ny fiaramanidina adiny rivotra; Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Mersin, Konya, Nevsehir, Nigde, Sivas, Aksaray, Kirsehir, Gaziantep, indrindra amin'ireo faritany mifanakaiky izay fohy ny fitaterana làlana, indrindra fa avy amin'ny tanànantsika ary manerana ny firenena dia aleon'i Erciyes.
Erciyes, izay tondron'ny mponina an-toerana sy ny vahiny isaky ny faran'ny herinandro, dia feno tamin'ity faran'ny herinandro ity. Eo amin'ny zaridainam-bahoaka mitobaka fiara 1500 ao Istanbul, Ankara, Antalya, Adana, Konya, Mersin, Hatay, Gazi Antep, Kahraman Maras, ao anatin'izany i Aydin, Balikesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Canakkale, Corum, Denizli, Edirne, Erzurum, Sakarya, Tekirdag, mandra-pahatongan'ny fiara avy amin'ny faritany 53 dia misarika ny saina.
Raha 45 isan-jaton'ny fiara ao an-tendrombohitra dia avy ao afovoan-tanàna ao Kayseri, ny 55% kosa dia any ivelan'ny tanàna. Raha ny antontam-baovao voaray dia vokatry ny fanisana fiara 1500 avy any Erciyes, dia voafaritra fa avy any Istanbul ireo fiara 250 tonga avy any ivelan'ny tanàna. Ankara no faharoa tamin'ny fiara 203 ary Adana no fahatelo ary fiara 113. Antalya 53, Nevsehir 47, Mersin 44, Konya 33, Aksaray 28, Nevsehir 25, Nigde Erciyes nahita fiara 20. Saika isaky ny alahady any Erciyes dia misy ny fifamoivoizana misy fiara manodidina ny 10.000 XNUMX eo noho ny fiara, ny fitsangatsanganana ary ny bus bus tour. Mpankafy fialan-tsasatra an'arivony avy any Kayseri sy faritany hafa milay mihazakazaka amin'ny ski manao hazakazaka sarotra, ary koa ny ski.
Erciyes Ski Center, izay lasa foibe iraisam-pirenena miaraka amin'ny serivisy atolotra, dia takian'ny mpizahatany eo an-toerana sy ny mpizahatany vahiny avy amin'ny firenena maro eran-tany. Mandritra ny vanim-potoana ririnina, mikarakara isan-kerinandro ny sidina mivantana avy any Kayseri, Russia, Ukraine, Belarus ary Polonina ho any Kayseri. Ho fanampin'ny sidina mivantana mankany Erciyes, sidina efa nomanina avy amin'ny firenena maro maneran-tany, mitombo isan-taona ny isan'ny mpizahatany vahiny any ski any Erciyes miaraka amin'ny fianakaviany, ireo namany sy vondrona avy any Alemana, Italia, Amerika, Angletera, Korea, Malaysia ary Frantsa.
Ny Ski Ski Denizli dia nanolotra olona 5 arivo isaky ny faran'ny herinandro
16 dia nampiantrano mpitsidika an'arivony nanomboka ny fanokafana Marmaray
Ny Eurasia Rail Fair dia nampiantrano mpitsidika 11 arivo 949
Tünektepe Cable Car sy Social Facilities 7 dia nampiantrano mpitsidika an'arivony 260 isam-bolana
Kocaeli Intercity Bus Terminal Host izay misy 42 an'arivony mitsidika
Ny fahavokarana herinandro ao amin'ny Erciyes Ski Resort
Feno herinandro tao Erciyes
Erciyes, dia nanapaka firaketana roa samihafa tamin'ny faran'ny herinandro
8. Ny Eurasia Rail Fair dia nitazona ny mpitsidika 12.322 notohanan'ny Izmir
Navoakan'ny mpitsidika 200 ny Expo Turkish Airlines
Ordu Çambaşı 15, izay tian'ireo mpizahatany amin'ny bisikileta vaovao, dia nampiantrano olona an'arivony
Ny seranam-piaramanidina Igdir dia manangona mpandeha 200 arivo ao anatin'ny herintaona
2014 dia nampiantrano mpandeha an'arivony tao amin'ny Merzifon Airport 140
Erciyes faran'ny herinandro